Ilay mpilalao Johnny Depp dia nanandrana nanely ny ady tamin'ny sarimihetsika "Labyrinth"
Ny kintan'i Hollywood, Johnny Depp, izay hita ao amin'ny horonantsary "Edward Scissorhands" sy "Alice in Wonderland", dia sahirana amin'ny filalaovana sarimihetsika antsoina hoe "Labyrinth." Eto amin'ity sary ity, i Johnny no mitana andraikitra lehibe - mpitsongo iray antsoina hoe Russell Poole. Na dia teo aza izany, i Depp dia naneho indray ny fomba fiasany tsy misy dikany amin'ny asany, satria androany dia nanjary fantatra fa nandritra ny toe-pahasalamany, nanao ilay ady ny mpilalao.
Tsy tia ny fizotran'ny "Labyrinth" i Johnny
Ny sarimihetsika momba ny kasety "Labyrinth" hita ao afovoan'i Los Angeles. Izay no nahatonga ilay mpilalao sarimihetsika, tarihan'ny talen'ny Brad Furman, manana alàlana hanakana ny làlana sasany, saingy, ora vitsy monja isan'andro. Omaly no nitifitra ny iray tamin'ireo sehatry ny "Labyrinth" nanomboka tamin'ny fotoana voatondro, saingy tsy tian'ny talen'ny mpandray anjara nandritra ny fotoana ela ny tale. Tsara ny manamarika fa tsy be atao i Depp tamin'ity sehatra ity ary izany no antony nanapahany hevitra ny handany ny fotoan'ny fisotroana alika matsiro sy sigara marobe. Rehefa vita ny sarimihetsika ary farany dia fotoana i Johnny hiseho eo anoloan'ny fakantsary, efa nisotro toaka izy. Tsy nety niasa taminy i Furman, indrindra fa hatramin'ny fotoana nahatongavan'ny fifamoivoizana teny an-dalamben'i Los Angeles.
Ao amin'ny "Labyrinth", i Depp dia milalao an'i Delective Russell Poole
Avy eo i Brad dia nitodika tany amin'ny mpanampy azy - mpitantana ny toerana - tamin'ny fangatahana hampahafantarana an'i Johnny fa tonga ny fotoana handao ilay setroka. Ho setrin'izany dia nanapa-kevitra ny hanitsy ny toe-javatra ny kintanin'ny sarimihetsika ary nanomboka nitantana ny dingana fa tsy tale. Indrisy anefa fa tsy nanao na inona na inona i Depp, ary nanomboka nanitrikitrika ny fampiatoana ilay horonantsary ny mpanampy. Tamin'ity fotoana ity dia nisy tranga iray izay nahatonga ady teo amin'ny mpitantana ny toerana sy Depp. Ny farany dia namely ny taolan'ilay mpanampy teo amin'ny taolam-paty, ary rehefa nosintonina izy dia nihiaka toy izao manaraka izao:
"Avia, afaho aho! Fantatro fa afaka manao izany ianao! Raha namely ahy ianao dia homeko anao $ 100,000! Tsy te hanao izany ianao? Noho izany dia malemy ianao! Moa tsy sahy mampandroso ahy ve ianao? Tsy manana zo hanao izany ianareo! ".
Indrisy anefa fa tsy naneho hevitra momba ilay zava-nitranga tao amin'ilay setriny ny mpitantana ny toerana, fa i Furman kosa niteny tamin'ny gazety hoe:
"Ny fihenjanana an-tsarimihetsika ao anaty horonantsary. Izany no antony mahatonga ireo tranga isan-karazany mandritra ny fizotry ny horonantsary. Ny zava-nitranga teo anelanelan'ny Depp sy ny mpanampy ahy dia tsy inona fa fihetseham-pon'ny fihetseham-po nandritra ny horonantsary. Izany dia mitranga matetika ary tsy misy lanjany izany. Tsy mieritreritra aho hoe nisy zavatra nahatsiravina nitranga. Nanafaran'ilay haino aman-jery ity tranga ity. "
Amber Hurd dia mandany fotoana miaraka amin'i Vito Schnabel
Niampanga azy ny mpiambina an'i Johnny Depp
Hevitra 25 fantatsika avy amin'i Jonathan Stryker
Johnny dia heverina ho olona mahonena
Tadidio fa teo amin'ny fiainana, efa nisy mpilalao sarimihetsika malaza ny mpilalao malaza, izay nahatonga fifandraisana tamin'ny polisy. Noho izany, ohatra, herinandro vitsy lasa izay, ireo mpiambina taloha an'i Depp dia nanakiana azy noho ny fampiasany azy ireo ho mpitsabo sy mpitsabo mpanampy. Ary tamin'ny fararano tamin'ny taon-dasa, ny mpanao gazety dia tezitra noho ny fisehoan'i Johnny tao anatin'ny toetr'andro mamoafady tao amin'ny premiere of the film "Murder in the Orient Express". Angamba tsy ho voamarikao ny fisotroan-dronono misy azy raha tsy naniratsira azy ireo tamin'ny fifandraisana tamin'ny media.
Cristiano Ronaldo dia manana fotoana hatraiza hatraiza: mba hiasa ho modely sy hifalifaly ao amin'ny orinasa ny ampakarina
Ny akanjon'i Katy Perry dia nipoitra tamin'ny endriny Oscar
Irina Sheik sy Bella Hadid nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny morontsirak'i Italia
Nanaiky i Emma Stone fa tsy afaka manadino an'i Andrew Garfield izy
Nicole Kidman dia nametraka an'i Keith Harrington ho toe-javatra mampidi-doza
Ny vadin'i Penelope Cruz no tena mpankafy azy!
Contrikal - famantarana ny fampiasana
Fandinihan-tena ara-pihetseham-po amin'ny fitondrana tavy
Iza no hetaera amin'ny angano grika sy amin'izao tontolo maoderina izao?
Ahoana no hisafidianana fehikibo ho an'ny pataloha?
Mofomamy ao amin'ny Multivariate
Paragoay - seranam-piaramanidina
Lanitra sinoa amin'ny tanany
Mandeha amin'ny fleofa ho an'ny alika
Honeysuckle - varieties
Chopper - vokatra chopper
Ny Park Ecological Reserve
Mampianatra teny Anglisy amin'ny ankizy
Bibidia - tsara sy ratsy
Afaho amin'ny fiara ilay vorona - famantarana